Nagu saabsan - Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
Dhaqidda iyo jeermiska 'Endoscope'
Madhalays ka dhigida
Sterilizer-ka Yar ee Steer (Autoclaves)
Jeermiska Jeermiska Dhexdhexaadka ah (Autoclaves)
Jeermiska heerkulka hooseeya
Kormeerka Ka-hortagga Bacriminta
Aagga Xirxirida & Madhalaysnimada
Meelaha Kaydinta Nadiif ah
Jeermiska Hawada Caafimaadka
Dhexdhexaadiyaha Saqafka Dhexe
Qalabka Shucaaca Iyo Cilad-baarista
Xalka Bag-Fill-Fill-Seal (FFS)
Dhalada caaga ah ISBM Solution
Xalka budada la qalajiyey ee SVP
Xalka Qiyaasta Qiyaasta
Jeermiska Jeermiska iyo Bacriminta
Mashiinnada dawooyinka noolaha
Daaweynta Biyaha Cabbitaanka Xoolaha
Golaha Amniga Biology
Steer Sterilizer (Autoclaves)
Shinva Medical Instrument Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1943 waxayna ku qoran tahay Suuqa Kala iibsiga ee Shanghai (600587) bishii Sebtember 2002.
Waa koox horseed u ah warshadaha caafimaadka gudaha is dhexgalka cilmi baarista sayniska, wax soo saarka, iibka, adeegyada caafimaadka iyo saadka ganacsiga ee qalabka caafimaadka iyo dawooyinka.
Qeybta qalabka caafimaadka, sagaal xariiq oo wax soo saar heer sare ah oo leh qaabeyn heer sare ah iyo teknolojiyad dhameystiran ayaa la sameeyay, oo daboolaya xakameynta cudurka, shucaaca iyo sawirka, qalabka qalliinka iyo lafaha, qolka qalliinka iyo qalliinka, qalabka ilkaha iyo waxyaabaha la adeegsado, reagent ogaanshaha cudurka aaladaha, qalabka bayoolojiga iyo waxyaabaha la isticmaalo, qalabka sifaynta iyo waxyaabaha la isticmaalo, ilaalinta deegaanka ee caafimaadka iyo dhinacyada kale Waqtigan xaadirka ah, noocyada kala duwan iyo soo saarista qalabka xakameynta cudurka ayaa ka mid ah kuwa ugu sarreeya adduunka. R&D iyo soosaarida qalabka shucaaca waa kuwo baaxad weyn leh, oo dhameystiran noocyo kala duwan, sarena ku leh saamiga suuqa gudaha kuna hogaaminaya heer farsamo.
Qeybta qalabka dawooyinka, waxay ka kooban tahay afar xarumood oo waaweyn oo teknoolojiyadda injineernimada ah: bio-pharmaceuticals, faleebo gaar ah, u diyaargarowga dawooyinka dhaqameed ee Shiinaha iyo u diyaargarow adag. Waxay isku dhafan tahay cilmi baarista iyo horumarinta, soo saarista iyo iibinta qalabka dawooyinka. Soo saarida qalabka dawooyinka ee caadiga ah, waxay siisaa midnimada "tiknoolajiyadda dawooyinka, qalabka dawooyinka iyo injineernimada dawooyinka" oo leh adeegyo tayo sare leh. Isla mar ahaantaana, waxay bixisaa dhammaan adeegga xirmada ee loogu talagalay dhismaha daawada kiimikada, daawada bayoolojiga iyo warshadaha daawada dhirta, waxayna xallisaa dhammaan walwalka macaamiisha.
Dhanka adeegga caafimaadka, Shinva waxay si isdaba joog ah u wanaajisay tartankeeda sumcadeed iyo sumcaddeeda. Ku tiirsanaanta maalgashiga xirfadeed, dhismaha, hawlgalka, soo iibsiga iyo adeegga, waxaan dhisi doonnaa koox isbitaal casri ah oo leh fikrado caafimaad oo horumarsan, heer cilmi-baaris cilmiyeed heer sare ah, silsilad maareynta sumadda iyo is-dhexgalka dabiiciga ee kheyraadka.
Qaybta caafimaadka iyo ganacsiga, Shinva waxay si firfircoon uga jawaabtaa qaabka cusub ee suuqa iyo isbedelada, waxay ilaalisaa tartanka joogtada ah ee shirkadda iyo firfircoonida horumarka caafimaad, waxayna fulisaa sahaminta qaab ganacsi iyo hal-abuurnimo.
Shinva: Diirada saarida Hormarka tayada sare leh